Fitsipi-pitondrantena Ataon’ ny Tena Samirery, Mba Ho Fepetra Arahana Amin’ny Fanaovan-gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2014 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Español, македонски, English
Ny fangon'ny “Online News Association” (Fikambanan'ny Filazam-baovao Amin'ny Aterineto).
Mbola fanontaniana mipetraka hatrany ny momba ireo fitsipi-pitondrantena tokony arahan'ny mpanao gazety, ary resaka iray ahitana karazan-kevitra samihafa avy eo amin'ireo mpizaha vaovao sy ireo mpanely azy. Mety mila fitsipika samy hafa ireo toe-javatra samy hafa. Tsy misy fehezan-dalàna tokana raikitra, tsy maintsy arahana, mahafehy ny toe-javatra rehetra.
Nikaroka itofony tany amin'ireo mpanoratra vaovao, ireo mpikaroka, ireo mpamoaka boky ny Online News Association (ONA) (Fikambanan'ny Filazam-baovao Amin'ny Aterineto) mba hamorona fitsipi-pitondrantena sy fehezan-dalàna tokony arahana ho an'ny famoaham-baovao, izay afaka ampiharina amin'ny toe-javatra maro. Miompana indrindra amin'ireo masoivoho mpampiely vaovao, ireo orinasa vao misondrotra, ireo mpanao gazety mandeha irery ary ireo mpitoraka bilaogy ny tetikasa.
Nilaza izao tamin'ny tafatafa tamin'ny emailaka i Tom Kent, tompon'andraikitry ny tetikasa :
Tsapanay ny filàna hisian'ny safidy iray ho an'ireo tsy tia mampiasa fitsipi-pitondrantena efa tonga dia vonona tahaka ny atolotr'ireo fikambanana maro, fa tia miasa amin'ny alàlan'ny fehezan-dalàna noforoniny manokana samirery, ary mampiseho ny lanja manokan'ny maha mpanao gazety azy.
Ao anatin'ny tena adihevitra amin'ny resaka fitsipi-pitondrantena tokony arahan'ny mpanao gazety, ny tsy fombàna na amin'iza na amin'iza amin'ny fampitàm-baovao dia tena anisan'ny zavatra tokony iainana ho an'ireo mpanao gazety. Mitady ny amohàna lalàna ny marimritra iraisana io tetikasa io, manome ireo fitsipika fototra fa kosa afaka miovaova “hevitra iaingana” izay afaka tefen'ireo mpanao gazety na ireo fikambanana araka ny fomba fijeriny manokana ny resaka fanaovana gazety. Hanome fanamarinana avy aminà fomba fijery maro isaky ny hevitra tsirairay koa ny fehezan-dalàna haroso eo.
Firaisan-kevitra amin'ny fototra iaingàna aloha no dingana voalohany amin'io zotra io, ireo zavatra tokony tena jerena ho an'ireo mpanao gazety, ao anatin'izany ny “filazana ny marina”, “fifandrohitan-tombotsoa”, “ny vondom-piarahamoniny”, “fihetsika amin'ny asa”. Manome hevitra izy ireo hoe tokony ataon'ireo mpampiely vaovao na mpanao gazety laharam-pahamehana ireo resaka voatanisa ireo.
Ny fiatrehana ny resaka tsy fombàna na amin'iza na amin'iza ho an'ireo mpampiely vaovao na ireo mpanao gazety no dingana faharoa amin'ilay zotra. Rehefa vita izany, afaka manefy ilay fitsipi-pitondrantena arak'izay hitany fa mahamety azy izy ireo. Ahitàna safidy avy aminà lisitra lavabe misy ireo olana izany, ny zavatra rehetra miainga amin'ny resa-betaveta sy ny dokambarotra, ka hatramin'ireoloharanom-baovao miafina. Ezahan'izy ireo izay hanatràrany ny sehatra iraisam-pirenena, amin'ny toe-javatra maro karazany mety ilaina, ary mba maka toetra manara fanavaozana hatrany.
Nahazo fandraisana anjara maro tamin'ny aterineto ilay tetikasa, ary nalefa tamin'ny fihaonan'ireo mpanao gazety tany Eorôpa, toy ny WAN-IFRA (Torin, Italy), ny “Organization of News Ombudsmen” (Hamborga, Alemana), ary ny “Global Editors Network” (Barselôna, Espana).
Naorina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny avy any ivelany ny fizotrany, olona miasa an-tsitrapo no mitondra ny fandraisany anjara amin'ny famolavolàna ny fitsipi-pitondrantena, ary manaiky ireo fanehoan-kevitra entin'ireo ankolafy rehetra liana amin'izany maneran-tany. Na izany aza, ilay ekipa fototra dia ahitana ireo mpanao gazety, ireo matihanina amin'ny fampahalalam-baovao, ary ireo mpampianatra asa fanaovana gazety avy aminà fikambanana Tandrefana karazany maro daholo. Nalefan'i Kent tamin'ny emailaka izao:
Efa tsapanay hatrany ampiandohàna fa mila omena endrika iraisam-pirenena mihitsy ilay fandaharan'asa. Niasa mafy mihintsy izahay mba hampirindràna ilay hevitra niaingàna voalohany amin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny firenena rehetra, indrindra fa ireo azo avy tamin'ireo fihaonana iraisam-pirenena voalaza etsy ambony (manana fandraisana anjara maro karazana tsara avy any avaratra ka hatrany atsimo izy rehetra ireo). Tonga avy any amin'ny toerana samihafa toa an'i India, Etiopia, Nepal, Kenya sy Senegal (tamin'ny alalan'ny tranonkala amin'ny aterineto, na olona fantatra manokana) ireo fanangonana avy eny ifotony. Niezaka ny namakafaka ireo resaka rehetra amin'ny lafiny mivelatra indrindra azo natao izahay.
Hitany fa amin'ny resaka sasany — nahita izy hoe misy mpanao gazety mandray fanomezana — nifampiresadresaka tamin'ireo mpanao gazety “tatsimo” izy ireo.
Tonian-dahatsoratry ny “Associated Press” (mpanao gazety miray) i Kent ankehitriny. Natao ilay tetikasa mba hanampiana ireo izay miasa ivelan'ny sehatry ny filazam-baovao efa voarafitra teo aloha (ireo mpitoraka bilaogy, ireo mpandraharaha vao misondrotra, ny olona tsirairay), manontany tena ihany hoe eo ampamoronana moramora sa tsia, ny fanatontoloana ireo lamina tokony arahana ho an'ny asa fanaovana gazety mahazatra ary ve izy ireo.
Na dia izany aza, feno fifampizaran-kevitra ilay fandaharana. Nanamarika izao i Kent :
Toa tsapako tena gaga aho tamin'ny fanolorantena manokana nataon'ireo mpanangona avy eny ifotony tato amintsika ho an'ireo fitspi-pitondrantena fototra antsika, indrindra ilay resaka hoe filazàna ny marina. Noheverinay fa hoe efa resaka mazava tsara ny “marina”, kanefa niatrika olana izay efa hita tamin'ny andron'ireo mpandinika voalohany mihintsy izahay : iray ihany ve ny marina, ary iza no manana azy? Ho valin'izany, miresaka bebe kokoa momba ny fahavanonana, fahamarinana ary fahitsiana izahay, sahala amin'ny ataonay rehefa miresaka ny “marina.”
Nitsiry tamin'ny atrikasa nandritra ny fivoriana isan-taona ataon'ny ONA, ny taona 2013 ilay tetikasa. Miasa amin'ny Google Docs izy ireo amin'izao, hanohy ny asany mandrapahatongan'ny fivorian'ny ONA any Chicago ny volana Septembra indray, rehefa hampiseho ny tatitra momba ny fivoaran'ny asa izy ireo, ary hiroso hiditra amin'ny resaka vohikala azon'ny rehetra idirana sy ifampiresahana indray.